The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: n'elu ise - News Ọchịchị
The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: n'elu ise
Isiokwu a na-akpọ “The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: n'elu ise - hulking nnukwu anụ na The Epic quests” e dere site Keith Stuart na Rich Stanton, n'ihi na theguardian.com on Friday 18 December 2015 10.21 UTC
Ha nọ ebe a: ise kasị mma egwuregwu nke 2015. Mgbe a izu nke mkparita uka, eneni ma jụ ikwere, anyị ruru ọgwụgwụ nke anyị njem na - dịtụ daba adaba - ise egwuregwu na nwere ihe The Epic quests.
Ọzọkwa, anyị dabeere na anyị ndepụta na utu aha ndị Guardian egwuregwu dere n'ezie egwuri kasị nke afọ a, nakwa n'ìgwè anyị eleghị anya furu efu ọtụtụ puku awa iji ndị a ahụmahụ - na ga-anọgide na-emekwa otú ahụ 2016.
All ndị a Ndenye na-ekwu okwu nke buru ibu oké ọchịchọ na oru mgbukepụ pụta ụwa nke oge a na egwuregwu ụlọ ọrụ. Ọ bụ ezie na nke a bụ a na-ajụ ewekarị nostalgia, anyị kwesịrị mgbe ụfọdụ kwụsị ma na-aghọta ihe: nke a bụ ihe ịtụnanya dị na ya ka a gamer.
5. Dachapụ 4 (PS4 / Xbox One)
A mara mma ọhụụ nke post-apocalypse ... fallout 4.
Dachapụ 4 bụ ihe anyị na-atụ anya. The Commonwealth, tọrọ ntọala na ihe na-abụrụ ya Boston, bụ uncommonly mara mma ọhụụ nke post-apocalypse. Jupụtara na ile remnants nke owuwu n'oge gara aga, onwe ha kwabara na crannies na nkwa nke akụ, nanị ịga ije bụ ihe njem n'ihi na anya. A ize ndụ otu uche, ekele na pulpy Sci-Fi nnukwu anụ na-adịghị agwụ agwụ ọgụ na punctuates na-awagharị njem. Ihe mgbaru ọsọ nke a roleplaying egwuregwu bụ ime ka player itinye ego na ọzọ n'ụwa, na ike ha akụkọ n'ime ya - fallout 4 N'ezie pushes button.
-Agụ fallout 4 nyochaa
4. Monster Hunter 4 Ultimate (3DS)
The kasị ọdịnaya-ọgaranya game Capcom mgbe ọ bụla emepụta ... Monster Hunter 4 Ultimate.
Monster Hunter 4U bụ ahụmahụ ọkachamara nke a ndepụta, ndị ọhụrụ ntinye na usoro na kpọgide isi arụzi ụgbọala n'oge ma iterated ebe ọ bụ na. Ma MH4U karịrị nnọọ mfe ukpụhọde, na n'ime àjà ihe na-ikekwe kasị ọdịnaya-ọgaranya game Capcom mgbe ọ bụla emepụta. -Abịa maka na-akpali akpali anụ ọjọọ agha na Nke nkenke ọgụ, -adịrị onye ezi outfits ị pụrụ ime ka nke ha akpụkpọ, na-ekpochapụ unu site camaraderie nke dinta-ngalaba-arụ ọrụ online.
3. Metal Gear siri ike V (PC / PS4 / Xbox One)
Hideo Kojima ụta si ... Metal Gear siri ike V: The phantom Mgbu.
Hideo Kojima si swansong na-ekpuchi ihe na-aga n'ihu saga nke ọpụpụ ya maka Konami. A ọmịiko n'ihi na MGSV: Phantom Pain me a ikpọ nso a pụrụ iche, -echepụta usoro na doo doro anya nọchiri. Kojima Productions re-engineered na isi nke MGS si stealth usoro dabara a ọhụrụ ụdị open-ụwa: condensed, nju-ọgaranya, ma agha ma na ama egwuregwu. The kasị fun akụkụ, dị ka Fulton, -eri nri n'ime fleshed-esi metagame nke Nne Base - na iwu ndị agha na Solid agwọ ga-ebibi na 1987 si Metal Gear. Nke a bụ ọgwụgwụ nke Hideo Kojima na Metal Gear siri ike, ọbọp azụ n'ime mmalite. Ma ihe a ụzọ na-aga.
Gụọ ihe ndị na Metal Gear siri ike V review
State nke nkà egwuregwu imewe ... Witcher 3.
A ụwa nnukwu ị nwere ike ida onwe gị na ya ụbọchị, a gruff-kwupụtara ụzọ kọrọ akụkọ n'ụzọ ụfọdụ retains ọchị na ndi mmadu, na a menagerie nke horribly kwesịrị ncheta nnukwu anụ na-akụ ọkpọ - Witcher 3 bụ ihe niile i nwere ike chọrọ site na-emeghe ụwa òkè-ebre njem. Ọ na-ewe ya akụkọ ifo kpọrọ ihe, ma ọ bụghị otú oké njọ na otu n'ime ndị mbụ n'akụkụ quests ị na-eme gafee na-enyere otu agadi nwaanyị ahụ ya kasị amasị ya ite. Nke a bụ ọkaibe mainstream egwuregwu imewe.
Gụọ ihe ndị na Witcher review
A ụwa jupụtara ná site anụ ọhịa ... Bloodborne. Foto: Sony
Bloodborne si director Hidetaka Miyazaki adịghị ike game ụwa, ọ na-emepụta egwuregwu na usoro na weaves a ụwa na akụkọ banyere ya gburugburu ha. Na n'èzí nile nke Yharnam na-abata anụ ọhịa na culled site dinta dị ka gị – ndị na-anwụghị site mgbe nile ọbara ozi. Ma Yharnam bụ naanị ụzọ ámá ka ihe Eldritch nro, na akụri remnants nke ọha mmadụ echu ndị ọ hụghị gị n'anya 'Ukwu Ahụ.'
A ọgaranya mythos-agwakọta ya na ihe emereme na-abara ighikota na atọ onye ọgụ, nke a na-wuru gburugburu na-adịgide adịgide awakpo si player na ojiji nke atọ na ngwá agha – a curved mma-agha na-aghọ a scythe, na-ekwu. The hulking werewolves na ụbụrụ-aṅụ árú nile ga dọwara ị iche na nke abụọ n'agbanyeghị, ma ọ bụ ndị na-atọ onyeisi akpata ịlụ ọgụ na ibuli a ọgụ usoro na-niile oge-akwa ọnọdụ.
Lovecraft ma na-ufiop nkenke ọgụ na-abụghị maka mmadụ nile, na Bloodborne bụ a siri ike ịma aka ka buut. Ma ọ bụ 2015 kasị mkpa Aaa ntọhapụ maka n'igosi otú ka mma-iwekota ọtụtụ, ọtụtụ akụrụngwa akụkụ nke a videogame n'ime a coherent ngwugwu. Bloodborne ụwa bụ n'elu ọbara, n'ụzọ nkịtị na atụ, na ihe ọ bụla akụkụ nke imewe aga site na nke a.
Gụọ ihe ndị na Bloodborne review
Kwesịrị nsọpụrụ kwuru - nke egwuregwu na dị nnọọ funahụrụ
Cybele: Nina Freeman si autobiographical akụkọ nwere na-akpali ihe na-ekwu banyere ịhụnanya ma na mmekọrịta na oge nke online Ịgba Cha Cha.
Mpịakọta: Robin Hood osobo Metal Gear siri ike na nke a nkọ minimalist stealth puzzler, nke ga-adịghị anya a ga-enweta ihe outing na PlayStation VR.
Yoshi si onya World: Ọzọ mara handicraft njem, -esonụ on si luscious Kirby si Epic Yarn.
Star Wars Battlefront: Ejedebeghị na okwu nke omimi na progression, ma EA Dice n'ụzọ zuru okè captures anya, -eche na ikuku nke na fim.
Ogidi nke mgbe ebighị ebi: Obsidian Entertainment ime mmụọ nọchiri classic edinam RPGs Baldur si Gate na Icewind Dale bụ dị ka miri emi, -ekere òkè na mma-e dere dị ka Fans choro.
Bipụtara site na Guardian News ndepụta plugin n'ihi na WordPress.
← Star Wars: The Force na-akpọte mbụ Jeremaya mere [Na] Ga-amasị Gị Pee Na Your Socks Iji Chajịa ekwentị? →
iPhone 11: Apple na-ebupụta ọhụrụ Pro smartphones na mma ese foto